Cyclone Giri Relief Fund: October 2010
1 Maharmuni Buddist Society----------------------- 1000
2 Sayadaw U thupiya------------------------------- 1000
3 Ko Thant Zaw Wai--------------------------------100
4 Ko Aung Than Soe--------------------------------100
5 Ma Khin Thet Tun-------------------------------- 100
6 Ko Nyi Nyi Tun + Ma Aye Aye Myint-------------50
7 Ma Khin Moe Moe Tun----------------------------50
8 Ko Maung Maung Soe-----------------------------100
9 Ma khin Than Yee---------------------------------50
10 Ko Maung Pu-------------------------------------100
11 Ma Khin Muyar San------------------------------- 100
12 Ma Khin Sabai----------------------------------- 50
13 Ko Than Kyaw Htay + Ma Hla Hla Shein------------ 100
14 Ma Khin Khin Nwe-------------------------------- 50
15 Ko Zaw Zaw Naing-------------------------------- 50
16 Ko Soe Tin------------------------------------- 100
17 Ko Tun Myint----------------------------------- 100
18 Ko Aung Bo Myint + Ma Wai Mar Pearl------------- 100
19 Ko Thet Hling Min + Ma Saw Nilar Pe------------- 100
20 Ko Aye Min Tun---------------------------------- 50
21 Ko Naing Aung Kyaw------------------------------ 50
22 Ko Kyaw Lay Thein------------------------------- 100
23 Ko Kyaw Zin Thein------------------------------- 200
24 Ko Myo Aye-------------------------------------- 100
25 Ko Zaw Min Naing-------------------------------- 50
26 Ma Swe Zin-------------------------------------- 30
27 Ko Naing Win + Ma Ei Ei Thu--------------------- 20
28 Ko Soe Lwin------------------------------------- 50
29 Hinn Wai Phyoe (mie mie)------------------------ 50
30 Daw Win Yu Nwe---------------------------------- 100
31 U Yay Chan & Daw Win Mar Htay------------------- 30
32 Ashin U Wanna----------------------------------- 50
33 Ashin U Witharya (Laymyo chaung)---------------- 50
34 Ko Nyein Chan Myo+ Ma Ngu Sandar Thein---------- 50
35 Ko Yay Chan------------------------------------- 50
36 Ko Wunna---------------------------------------- 50
37 Ko Aung Win Myat + Ma Nang Win Ei Chaw---------- 100
38 Ko Myat Aye Nyein------------------------------- 50
39 Ko Ye Myint + Ma Ei Thandar Lin----------------- 50
40 Ko Aung Myint Zaw + Ma Khin Hnin Myat----------- 50
41 Ma Cho Zin Wint---------------------------------- 70
42 Ma May Zin Win Maw------------------------------ 10
43 Ma Phyu Me Me Than------------------------------ 50
44 Ko Zaw Min Thet--------------------------------- 50
45 Ms Celenu Lu------------------------------------ 20
46 Ma Thidar--------------------------------------- 15
47 Ma Phyu Hnin Wai-------------------------------- 10
48 Ma Cho Mar Nyunt-------------------------------- 50
49 Ko Ngwe Soe------------------------------------- 50
50 Ma Khin Su Su Hlaing---------------------------- 50
51 U Tin Yu + Daw Htay Htay Maw-------------------- 50
52 U Aung Win + Daw Ohnmar Thaw ------------------- 50
53 Ko Soe Thiha + Ma San San Htay----------------- 50
54 Ms Pearlyn Lim--------------------------------- 15
55 Ms Paige Lin----------------------------------- 15
56 Pyae Pyoe--------------------------------------- 25
57 Ko Zeyar Aung----------------------------------- 50
58 Ko Oak Kyaw Za -------------------------------- 50
59 Ma Tin Htike Sandar----------------------------- 50
60 Network for Green Myanamar---------------------- 100
61 Ma Mya Win Yee + Ma Wai Wai---------------------- 15
62 Ma Aye Pwint Thu-------------------------------- 30
63 U Myint Thein + Daw Kyi Kyi Than----------------- 100
64 Daw Tin Tin Aung--------------------------------- 50
65 Ko San Win + Ma Aye Aye Min----------------------- 50
66 Ma May Soe Aye----------------------------------- 100
67 U Aung------------------------------------------ 30
68 Ma Khin Ti Moe---------------------------------- 50
69 Ma Phyu Phyu Thein------------------------------- 50
70 Ma Win Win---------------------------------------- 20
71 Ma Khin Khin Nyunt------------------------------ 100
72 Ko Saw Naung Pe family-------------------------- 100
73 Sai Thiha + Nan Sandar Tun----------------------- 50
74 Ko Aung Ko Oo----------------------------------- 10
75 Sai Sai Mon-------------------------------------- 10
76 Ko Win Myint Tun---------------------------------- 10
77 Sai Aung Aung-------------------------------------- 10
78 Nan Saing Hyunm--------------------------------- 15
79 Nan Saing Matt-------------------------------------- 10
80 Nan Khanm Aye----------------------------------- 10
81 Tin Saw Myint----------------------------------------- 10
82 Sai San------------------------------------------ 10
83 Ann Ku--------------------------------------------- 20
84 Ko Than Zaw Win + Ma Moe Moe Win----------------- 10
85 Ma Khin Than Htay-------------------------------- 5
86 Ma War War Ko------------------------------------- 10
87 Ma Khin Khin Nyein------------------------------ 50
88 Mya Sandar Nyo---------------------------------- 40
89 Mya Than Tar Nyo-------------------------------- 30
90 Ko Tin Aung Nu + Ma Thi Tar Myint---------------- 20
91 Ma Sandar Oo------------------------------------ 10
92 Maing Nilar------------------------------------- 10
93 Ma Nan Lung Laing------------------------------- 20
94 Ko Myo Kyaw Thu + Ma Thin Taw Tar Tun----------- 200
95 Ko Aung Myo Thu--------------------------------- 50
96 Ko Yan Bo--------------------------------------- 50
97 Ma Pa Pa Mon------------------------------------ 50
98 Ma Nan Kyu Kyu Khine---------------------------- 100
99 Ko Phyo Wai Aung-------------------------------- 100
100 Ma Tandar Linn---------------------------------- 50
101 Ma Khin Mar Aye--------------------------------- 50
102 Daw Twe Twe Soe--------------------------------- 50
103 Ko Than Hlaing Moe + Ma Khin Swe Myint---------- 20
104 Ma Than Than------------------------------------ 100
Total amount (Closed Date - 5:00 pm, 30/10/2010)-------- 7445.00
Donated amount To KPU (Date - 24/10/2010)-------------3571.43
Balance Amount (Date - 30/10/2010)---------------------- 3873.57
Posted by Mee Bo Gyaung at 7:38 AM0comments
ဆိုင်ကလုန်း ဂီရီ တဲ့၊ မြန်မာလို အနက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ‘တောင်ကြီး’ ဟု အမည်ရသော အင်အားကြီးမားသည့် ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်း တခုပေါ့။ ဒီမုန်တ်ိုင်းကြီးဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ တွင် တစ်နာရီ မိုင် ၁၀၀ ၀န်းကျင် (Category 4) ခန့် ဖြင့် ကျောက်ဖြူမြို့ နှင့် မြေပုံ မြို့ ကြားကနေ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းအား ၀င်ရောက် တိုက်ခတ်သွားခဲ့သည်။ ဂီရိရဲ့ ရက်စက်မှုကို ရင်ဆီး ခံလိုက်ရတဲ့ ကျေုာက်ဖြူနဲ့ မြေပုံ မြို့တွင်မက ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကို မေးတင်ထားတဲ့ ရွာပေါင်းများစွာ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့ရလေပြီ။ သြော် ရက်ရက်စက်စက် မညှာမတာ၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မတိုင်ခင်မှာ တိုက်ခဲ့တဲ့ ဂီရိကြောင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ၊ ရိုးရာဓလေ့ ရခိုင်ကျင်ပွဲများနဲ့စည်ကားလေ့ရှိတဲ့ သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ ဟာ မုန်တိုင်းဒဏ်တွေကြားမှာ မှုန်းဝါးစွာ ကျန်ခဲ့ရပေတော့သည်။ လူတွေလဲ ဘုရားသွား ကျောင်းတက် ဥပုဂ်ယူရန်လည်း သတိမမူနိုင်ပဲ အခက်ပွေရချေပြီ။
ဂီရိဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ ကျတော်တို့့ က နိုင်ငံတကာ မိုးလေ၀သ website တွေကနေ အချိန်နဲ့တပြေးညီ ထုတ်ပြန်နေတဲ့ သတင်းများအရ တရစပ် သိနေခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီနေ့ မနက်ပိုင်းအထိ မုန်တိုင်းမှာ Category 1 သာရှိပြီး လေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီ မိုင် ၅၀-၆၀ ခန့် သာ ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့် မှန်းခဲ့ကြတော့ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် သိပ်တော့ စိတ်မပူခဲ့ဘူး။ ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက် တစ်နာရီ မိုင် ၅၀-၆၀ မုန်တိုင်းဆိုတာ ထမင်းစားရေသောက် ဖြစ်နေတာကိုး။
ဒီလို လေတိုက်နှုန်းလောက်တော့ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတွင်း နှစ်စဉ် မိုးဦး၊ မိုးနှောင်း မုန်တိုင်းရာသီ တွေမှာ တိုက်ခတ်လေ့ရှိနေတာကြောင့်၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်တာ၊ ဘေးလွတ်ရာ ကုန်းမြင့်များ၊ ခိုင်ခံ့သော အဆောက်အအုံများသို့ပြောင်းရွှေ့တာ လုပ်ရကောင်းမှန်းတောင် မသိပါဘူး။
ရေဒီယိုတွေကလဲ အဆက်မပြတ် သတိပေးနေပေမဲ့ ရခိုင်သားတွေအတွက်တော့ စိုးရိမ်စရာကို မရှိခဲ့တာလေ။ တချို့တံငါရွာတွေဆို သတင်းတောင်သေချာ မသိခဲ့ရဘူးလို့ ကြားခဲ့ရတယ်။
ညနေဖက်မှ မုန်တိုင်း မထင်မှတ်ဘဲ အားကောင်းပြီး ၀င်လာတော့ လေတွေက တအားကောင်းလာတယ်။ တဝေါဝေါနဲ့ကြောက်စရာ အသံကြီးတွေ နဲ့တိုက်ခတ်လာတယ်.အပြင်ကိုကြည့်တော့လဲ ဘာမှ သေချာမမြင်ရတော့ဘူး. ပြေးဖို့ဆိုတာဝေလာဝေး.အိမ်ထဲမှာပဲ ဘုရားတပြီးနေနေ ကြတဲ့ မိသားစုတွေ ဒုနဲ့ ဒေးဘဲ။ ဂီရိကတော့ အငြိုးကြီးစွာ ရက်စက်စွာ တိုက်ခတ်နေတုန်းဘဲ..ဟော အနှစ်နှစ်အလလ ရှင်သန်ခဲ့တဲ့ အပင်တွေ ပြိုကျခဲ့ပြီ.. အိမ်ကြီးရခိုင်လို့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အိမ်တွေ အမိုးတွေလန်.. ပြိုကျ မြေခ ကုန်ကြပြီ။ ရေတွေဝင်လာပြီး တမြို့လုံး အလဲလဲ အကွဲကွဲနဲ့စစ်တလင်းလိုကျန်ခဲ့ရပြီ။ ဘုရားသွား ကျောင်းတက်ရမယ့် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေလေး မှုန်ဝါးဝါးကျန်ခဲ့ရပြီ။ ငိုသူတွေငိုကြ.. ကလေးငိုသံတွေ.. ခပ်သဲ့သဲ့ ရှိုက်သံတွေနဲ့ပဲ့တင်နေတဲ့ မြို့ကလေးဖြစ်ခဲ့ရပြီ. မနက်ဖြန်ဆိုတာ ဘယ်မှာလဲ..နေစရာ အိမ်ကော ဘယ်မှာလဲ..အဖေ နဲ့ အမေကော ဘယ်မှာလဲဆိုတဲ့ ရင်ထုမနာသံတွေနဲ့ပူဆွေးနေတဲ့ မြို့ကလေး အဖြစ်ပြောင်းလဲ ခဲ့ရပြီ။
ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ အိမ်တွေ.. ကျွဲနွား တွေ..ပြီးတော့ ငါးဖမ်းလှေတွေ.. အို အကုန်လုံး ပျက်ဆီး ခဲ့ရလေပြီ။ ရင်ထဲမှာလှိုက်ခနဲ ၀မ်းနဲပြီး စဉ်းစားမိသည်။ ငါဒို့ ချစ်တဲ့ ငါဒို့ မြေ..ငါဒို့ ချစ်တဲ့ ငါဒို့ သွေးတွေ.ငါဒို့ငယ်စဉ်က ပျော်ပါး ဆော့ကစားခဲ့တဲ့ လမ်းကလေးတွေ အရာအားလုံး အဝေးမှာ ကျန်ခဲ့လေပြီ။ အနောက်ဖက် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကို မေးတင်ထားသော ပင်လယ်ကမ်းစပ်နားက ရွာလေးတွေကကော? ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပါလိမ့်.. မြို့ပေါ်မှာတောင် ဒီလောက်ဖြစ်နေခဲ့ရင် ဒီရွာလေးတွေကော.. ရေတွေ လွှမ်းပြီး အရာရာ ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရပြီ.. ။ ဂီရိရဲ့ ရက်စက်မှုက ပြင်းထန်လေစွ။ အပြစ်မဲ့ တဲ့ ပြည်သူ၊ပြည်သားတွေ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် ပျောက်ဆုံးကာ ဘ၀ပျက်ရလေပြီ.။ ဒီသတင်းတွေကို အင်တာနက်ကနေ ဝေေ၀ဆာဆာဖတ်ခွင့်ကြုံရမှာ မဟုတ်ဘူး။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက မကောင်း၊ အကူအညီတွေ ထိထိရောက်ရောက်မရနဲ့ကိုယ့်သောက ကို ရင်ဆီးခံနေတဲ့ အပြစ်မဲ့ လူသားတွေကို ကမ်းလင့်မယ့် လက်တစုံလ်ိုအပ်နေလေပြီ။
အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့ မှာ ကျတော်တို့စင်ကာပူရောက်မြန်မာများနဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အသင်းဝင်တွေကို ဆရာတော်ဦးသုပိယ ဦးဆောင်ပြီးတော့ မဟာမုနိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့တယ်။ ဒုက္ခသည်တွေလိုအပ်နေတဲ့ အစားအစာ၊ အမိုးအကာ၊ ဆေးပစ္စည်းတွေ ကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီကြမယ်ဆိုပြီး
ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေကို ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ မိမိရဲ့ အမျိုးကို စောင့်သိခြင်းသည် မင်္ဂလာတစ်ပါးဆိုတာ ကိုယ့်ဆွေ ကိုယ့်မျိုး ကိုယ့်သွေးမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်မြန်မာ နိုင်ငံသားတိုင်းကို ကူညီ စောင့်ရှောက်ခြင်းဟာလဲ ကြီးစွာသော မင်္ဂလာ တပါးပါဘဲ။
ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့အတူ မိမိရဲ့ ချွေးနှဲစာလေးတွေကို ထည့်ဝင်လှူဒါန်းတဲ့ အလှုရှင်တွေ ကို ကျေးဇူးတင် သာဓုခေါ်သလို တက်နိုင်သလောက်လက်ဆင့်ကမ်းသတင်းပေးပြီး အလှုငွေများကို ထည့်ဝင်ကြပါလို့တိုက်တွန်း မေတ္တာ ရပ်ခံလိုက်ပါတယ်။
Cyclone Giri Relief Fund (SINGAPORE)
Posted by Mee Bo Gyaung at 7:32 AM0comments
Cyclone GIRI Relief Fund Bank Joint Account
POSB Saving 248-42328-5
အထက်ပါ အကောင့်သို့တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်၊
လွှဲပြီးပါက အောက်ပါ အီးမေးများအား အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
myomyint.tun08@gmail.com, thant.zw@gmail.com, aungbomyint@gmail.com
Posted by Mee Bo Gyaung at 7:18 AM0comments
Minutes of Meeting from Cyclone Giri Relief Efforts Coordination Meeting #1
နေ့ စွဲ ။ ၂၄ အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၀
နေရာ ။ ဗုဒ္ဓဂယာ သုခါရာမကျောင်း (No-45, Corporation Rise, Taman Jurong, Singapore 618359)
(၁) ဆရာတော် ဒေါက်တာဦးသုပီယ (ဗုဒ္ဓဂယာ သုခါရာမကျောင်း၊ စင်ကာပူ)
(၂) ဆရာတော် ဒေါက်တာဦးဇယတိဿ (စင်္ကာပူနိုင်ငံ သစ္စာပါရမီကျောင်း)
Cyclone GIRI Relief Fund ကို အမာခံဦးဆောင်မည့်သူများစာရင်း
ဆိုင်ကလုန်း ဂီရိ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ လေဘေးဒုက္ခသည်များအား လတ်တလော လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် အစားအသောက်၊ ရေ၊ ဆေးဝါးများနှင့် ယာယီနေရာ ထိုင်ခင်း ကူညီပံ့ပိုးရန်။
(၁) အလှူငွေလက်ခံရန် Bank Joint Account ဖွင့်ရန် (ကိုမျိုးမြင့်ထွန်းနှင့် ကိုသန့်ဇော်ဝေ တို့မှ joint account ဖွင့်ပြီး အလှူငွေများ လက်ခံမည်။)
(၂) ကော်မတီဝင်များမှ fund Raising ကို အားသွန်ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက်ရန်
(၃) ကျောက်ဖြူအသင်း(ရန်ကုန်) တို့အားအမြန်ဆုံးလွှဲပေးရန်
(၄) အလှူငွေကောက်ခံရရှိမှုနှင့် ၎င်းအလှူငွေအား စီမံခန့်ခွဲမှုကို email နှင့် face book မှတဆင့် စဉ်ဆက်မပြတ် သတင်းပြန်ကြားရန်
(၅) လက်ရှိတွင် ငွေသားသက်သက်သာ အလှူခံရန်
(၆) လှူဒါန်းမှုများအား ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို များဖြင့် အလှူရှင်များအား စဉ်ဆက်မပြတ် သတင်းပြန်ကြားရန်
(၇) ဆရာတော်ဦးသုပီယမှ ဦးဆောင်၍ အလှူငွေ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀၀ မတည်မည်
(၈) ၂၄-၁၀-၂၀၁၀ တွင် ပထမအသုတ်အနေဖြင့် မြန်မာငွေ ကျပ် (၂၅)သိန်း လွှဲပြောင်းပေးရန် (အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်သုံးရန်)
(၉) ကျောက်ဖြူမြို့နယ်အတွက် (၁) ဦးစံထွန်း (၂) ကိုဗလကြီး (၃) ဦးထွန်းသွေး တို့ ထံသို့ ပထမအသုတ်အား လွှဲပြောင်းပေးမည်။
(၁၀) ရခိုင်အသင်း (စင်္ကာပူ) ၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် fund ငွေ ကောက်ခံမှုတွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်။
၂၄ - ၁၀-၂၀၁၀ နေ့ ကောက်ခံရရှိငွေ ၃၈၈၀ စင်္ကာပူဒေါ်လာ
Posted by CycloneGiriReliefFund at 1:48 AM0comments
Cyclone GIRI Relief Fund donors list till 30-Oct-2...